Iche ndi njem ahia nke ndi ahia | Martech Zone
Fraịde, Septemba 25, 2015 Fraịde, Septemba 25, 2015 Laura Swanson
Logwa ndị ahịa ọ bụla ihe ịzụ ahịa abụghị echiche ọhụrụ. Chee echiche banyere mmetụta ị na-enweta mgbe ị gara n'otu ụlọ oriri na ọ localụ localụ na onye na-elekọta nwanyị na-echeta aha gị na nke gị mbụ. Ọ na-adị mma, nri?
Nhazi onwe onye bụ banyere ịmaliteghachi aka ahụ, na-egosi onye ahịa na ị ghọtara ma lekọta ya. Tekinoloji nwere ike ime ka usoro ihe eji eme ihe, mana ezi ihe ndi mmadu bu bu uzo na uche nke putara ihe na ndi ahia gi na ahia gi.
Mfe karịa ime eme. Ndị na-ere ahịa na aha ahịa na-alụ ọgụ maka ebe ha ga-ebido, ihe ha ga-ebute ụzọ na ihe ngwọta ha ga-eme. Na FitForCommerce, ndị ahịa anyị na-ajụkarị "Gịnị ka m ga - eme iji hazie ahụmịhe ndị ahịa?" Dị ka ị ga-atụ anya ya, e nweghị “otu-ụzọ-ihe nile” azịza ya.
Napụta ahụmịhe ịzụ ahịa ahaziri iche na ọnụ ọgụgụ – ruo ọtụtụ puku ma ọ bụ ọtụtụ narị puku atụmanya na ndị ahịa ugbu a – chọrọ leveraging ọkaibe data, usoro na teknụzụ. Nke ahụ nwere ike ịdị gị oke. N'ezie, ndị na-ere ahịa nwere ike itinye teknụzụ ọhụụ nke na-enyere ha aka ịme nyocha A / B, nakọta data, ma ọ bụ hazie ahịa email ma ọ bụ ahụmịhe saịtị. Mana, na-enweghị atụmatụ zuru ezu, usoro ndị a abụghị ezigbo.
N’oge na-adịbeghị anya, anyị nyochara ihe karịrị ndị isi ụlọ ọrụ 100 dị elu, gbara ọtụtụ ajụjụ ọnụ na ndị na-ere ahịa na ndị na-enye ọrụ teknụzụ, yana itinye ihe ọmụma anyị n’onwe anyị maka akụkọ 2015 kwa afọ, Ka anyị nweta nkeonwe: Nhazi onwe onye ọ bụla na ụwa ejikọtara ọnụ. Nkwupụta ahụ na-enye usoro njikọ maka ijikọ onwe onye na usoro ọ bụla nke njem ịzụ ahịa-site na ịre ahịa n'ụzọ niile maka nnyefe ngwaahịa.
Gịnị mere ị ga-eji lebara ya anya?
Agha a iji merie ndị ahịa na iguzosi ike n'ihe nke ndị ahịa adịtụbeghị ọkụ ma ndị ahịa anaghị achọkarị. Agbanyeghị ọwa, ndị ahịa gị na-atụ anya ka ozi ahịa gbasaa, ọdịnaya ga-aba uru, yana ngwaahịa yana onyinye ga-adị mkpa. Ọ bụrụ na imere nke a, ọ ga - emetụta usoro ala gị. Ọtụtụ ndị ahịa ga-eji obi ụtọ kesaa ozi nkeonwe gbasara onwe ha ma ọ bụrụ na ha mara na ọ ga-enye ahụmịhe ndị a dị mkpa na nke onwe ha.
Ọtụtụ ihe ị ga-eme, obere ...
Oge? Ihe onwunwe? Mara ka esi eme? Zuo-in? Ihe ndị a bụ ụfọdụ n’ime nsogbu ndị ndị na-ere ahịa zoro na-agbalị itinye usoro nkeonwe. Ikekwe Nzọụkwụ Otu n'ime nsogbu ndị a bụ njikwa ịzụta. Ozugbo ndị isi nchịkwa na-aghọta otu ịhazi onwe gị nwere ike isi bulie ego, ị nwere nkata ka mma n'inweta akụrụngwa na ego ịchọrọ.
Nhazi onwe bu, ma kwesiri ibu ihe mbu
Nhazi onwe bu ihe mbu ahia maka ahia, obu ma oburu na ha amaghi ka esi eme ya. 31% nke ndị isi anyị nyochara na-ekwu na ịhazi onwe ha so n'ime ihe atọ kachasị mkpa ha maka 2015.
Gbanyụọ ya n'ime ihe eji arụ ọrụ a haziri gburugburu njem ịzụ ahịa. Chee echiche otu ị ga-esi hazie ahụmịhe na ọkwa nke ọ bụla.
Na-adọta uche ya. Kedu ihe na-adọta ya na saịtị gị? Kedụ ka ị ga - esi jiri ihe ị ma maka onye ahịa gị tinye ya na ya?
Have nwere ya ntị. Ugbu a, olee otu ị ga-esi jiri ọdịnaya nke ahaziri iche, onyinye, usoro ịzụ ahịa na usoro kachasị mma iji mee ka ọ banye ma mechie ọrịre ahụ?
Obi ụtọ ya ọbụna n'ihu. Ozugbo enyere iwu, olee otu ị ga-esi hazie nnyefe ngwaahịa, nkwakọ ngwaahịa na ọrụ ndị ahịa iji meziwanye mmekọrịta gị na ya?
Zere ndị na-akpụ akpụ ihe. Nzuzo na nchekwa bụ nchegbu. Olee otú ị weghara ya ozi na-echebe ya?
M mama nke na-ejikọ ya niile. Kedu ụdị data ị kwesịrị ijide, olee otu ị si anakọta ya na, nke kachasị mkpa, olee otu ị ga-esi jiri ya mepụta ahụmịhe nke onwe.
Ozugbo ị gafere usoro nghota nke otu ị ga-esi hazie ahụmịhe ahụ dum, nhọrọ banyere otu esi eme ya na teknụzụ ị ga-eji mee ka ọ dị mfe. Obi abụọ adịghị ya na mpaghara a ga-aga n'ihu na ndị na-ere ahịa na ụdị ndị na-eji ma meziwanye mbọ ha na-eme ka ohere dị mma iji merie agbụrụ ahụ maka ntụgharị ndị ahịa na iguzosi ike n'ihe karịa ndị na-adịghị.
FitForCommerce bụ ụlọ ọrụ boutique na-enyere ecommerce na azụmaahịa omnichannel aka ịme mkpebi itinye ego na atụmatụ, teknụzụ, azụmaahịa, azụmaahịa, arụmọrụ, ego, nhazi nhazi na ndị ọzọ. Ndị ndụmọdụ anyị bụ ndị na-ere ahịa ma ọ bụ ndị na-ere ahịa na mbụ nke na-enye ahụmịhe ha iji nye nduzi na njikwa aka na ihe niile dị mkpa iji wuo, too ma mezie azụmahịa gị.
FitForCommerce ga-egosipụta na Nzuko Digital Shop.org na Philadelphia na October 5th-7th na ụlọ ntu # 1051.
Tags: njem ndị ahịanzuzo nke onye ahịaahịa nchekeonweahaziri
Laura Swanson bụ onye ndụmọdụ ọkachamara na FitForCommerce, yana ihe karịrị afọ 20 nke ndu na azụmaahịa ọtụtụ ọwa, gbasara ọtụtụ mpaghara nka - site na yingzụ, Atụmatụ & Nhazi, Ndị Ọrụ, Ọrụ Azụmaahịa, IT / Telecom na Ndị Ahịa na Omnichannel Strategy.